China Escalator yekushandisa musangano wefekitari fekitori nevatengesi | Hongli
Escalator rudzi rwekuenderera mberi kwemidziyo iyo inoumbwa nechero dhiriji rakasarudzika remhando yakasarudzika uye bhandi rinodzvinyirira rakakosha chimiro. Iyo ine akawanda mabhenefiti akadai saizi hombe yekufambisa, inoramba ichitakura vashandi. Saka zvinodiwa zvekuchengetedza zvakakwira kupfuura zvimwe zvinoshandiswa. Iyo inonyanya kushandiswa munzvimbo dzeveruzhinji nekuyerera kunoyerera kwevanhu, sekumisika, makirabhu, zviteshi, nhandare nendege.
Dhiraivha huru ine simba rakaringana uye kuomarara uye dzakasiyana-siyana masproketi akaturika akavimbika padanda. Ita kukanganisa pane izvo zvakatsemurwa pane shaft. Sprocket inotora yakakosha kabhoni simbi, mushure mekupisa kurapwa, kuomarara kwemukati zvine musoro pasi peano mapurojekiti anowanzo kuda kuve nechokwadi chekuti sprocket inoshanda hupenyu hwemakore anopfuura makumi maviri. Kureba kweiyo main drive keteni kunofanirwa kuve kuri pakati. Kana iyo tambo huru yekutyaira yakanyanyisa kana kusununguka zvakanyanya, iko kunyaradza kwesiti remutyairi kuchakanganiswa, ndiko kuti kukosha kwekufamba kweanokwira kuchawedzera.
Handrail bhanhire rinomhanya kumhanya
Iyo yekumhanya mhanya kweye handrail bhanhire inoenderana nedanho uye inobvumidzwa mutsauko weiyo pedal ndeye 0- + 2%.
Nei handrail bhandi ichifanira kukurumidza kupfuura yekufambisa?
Kutanga, iyo yepamusoro mirimo inoda kuti kumhanyisa kwebhandi re handrail kunofanirwa kunge kuri kukuru kupfuura kana kuenzana nekumhanya kwematanho uye nematanho. Chinodikanwa chakadai ndechekudzivirira kubata ruoko, handiti nekuti kumhanyisa kwebhandi re handrail kuseri kwekumhanya kwe nhanho kana kukwasira uye kukonzeresa kuti muviri wemunhu usendame shure uye uve nengozi.
Ipapo vanhu vanogona kurwadziwa zvakanyanya paanokundikana kumashure pane paanokundikana mberi.
Steering mudziyo wepasi njanji mota